दाम्पत्य सम्वन्ध : जति धेरै झगडा, उति धेरै माया ! – AP Khabar
२७ मंसिर २०७५, बिहीबार ०८:१२ 2018-12-13 एपी खबर1 Comment on दाम्पत्य सम्वन्ध : जति धेरै झगडा, उति धेरै माया !
मंसिर २७ : श्रीमान र श्रीमतीबीच ठाकठुक पर्नु र नोकझोक हुनु दाम्पत्य सम्वन्धकै एउटा हिस्सा हो । तर, यस्तो प्रकारको झगडा प्राय अल्पकालिन नै हुन्छन् । ‘लोग्ने स्वास्नीको झगडा परालको आगो’ भन्ने त भनाई नै छ ।
झगडाले क्रोध कम गर्छ
सुखी दाम्पत्य जीवनको लागि सम्बन्ध दिगो र स्वस्थ हुनुपर्छ । सम्बन्धमा रहन सजिलो कुरा होइन र यदि तपाईं आफ्नो पार्टनरलाई माया गर्नुहुन्छ भने आफ्नो सीमाहरु तय गर्नुपर्छ ।
कहिलेकाहीँ आफूले अपेक्षा गरेजस्तो व्यवहार आफ्नो पार्टनरबाट नपाउँदा क्रोध उत्पन्न हुन सक्छ । र, क्रोधलाई तपाईंले मनभित्रै दबाएर राख्नुभयो भने तपाईंको रीस झनै बढ्दै जान्छ जसले एक अस्वस्थ सम्बन्धतर्फ डोर्याउँछ ।
त्यसैले यस्ता समस्यासँग लड्ने सबैभन्दा राम्रो उपाय बहस गर्नु हो । नकारात्मक भावनाहरुलाई हटाउन र दुवैजनाको भावना र आवश्यकताहरु समान छन् भन्ने बोध गराउन कहिलेकाहीँ विवादले पनि काम गर्छ ।
समस्या समाधानका लागि झगडा
केही अध्ययनहरुका अनुसार सबैभन्दा ठूलो गल्ती पार्टनरहरुले एक-अर्कालाई बेवास्ता गर्नु हो । कहिलेकाहीँ हामीले कुनै कुरा गलत भएको महसुस गर्छौं, तर पार्टनर रिसाउने डरले केही पनि भन्दैनौं । तर, यसरी नै कुराकानीमा कमी हुनु नै ब्रेकअप हुने सबैभन्दा ठूलो कारण बन्न सक्छ ।
संवेदनशील कुरामा एक-अर्कासँग बहस गर्नाले सम्बन्धलाई राम्रो गर्छ । झगडाले नै तपाईंलाई आफ्नो समस्याहरुमा केन्दि्रत हुन दिन्छ र समस्या हुन अगाडि नै त्यसलाई समाधान गर्न सघाउँछ । त्यसैले जुन जोडीहरु प्राय झगडा गर्छन् उनीहरु लामो समयसम्म सँगै रहन्छन् ।
झगडाले उत्साह देखाउँछ
केही जोडीहरुले गम्भिर बहस गर्न मनपराउँछन् किनभने त्यसले उनीहरुको हार्मोनको स्तर बढाउँछ ।
त्यसैगरी ती मानिसहरुलाई थाहा हुन्छ कि झगडा उनीहरुको उत्साहको संकेत हो । यसले एक-अर्काको विचारलाई स्थान दिन र सम्मान गर्न सिकाउँछ । उनीहरुको फरकपनाले सम्बन्धलाई झनै रोमाञ्चक बनाउँछ ।
झगडाले दिक्कलाग्दो स्थिती आउन दिँदैन
यदि तपाईंहरु धेरै वर्षदेखि सँगै रहनुभएको छ भने पक्कै पनि पार्टनरका केही कुराहरु मन नपर्न सक्छन् र त्यो गलत पनि होइन । रचनात्मक द्वन्द्वले तपाईंको सम्बन्धलाई झनै प्रगाढ बनाउँछ ।
पार्टनरले तपाईंले भनेको सबै कुरा मान्ने र उनले भनेको पनि सबै तपाईंले मान्ने हो भने जीवन कति दिक्कलाग्दो हुन्छ होला, एकपटक सोचेर हेर्नुहोस् त ।
त्यसैले पार्टनरसँग अर्कोपटक झगडा भयो भने धेरै नआत्तिनुहोस् । बरु आफ्नो असमतिलाई प्रष्टसँग व्यक्त गरेर झगडालाई भविष्यको सम्बन्ध राम्रो बनाउने प्रयास गर्नुहोस् ।
९० लाख खर्चिएर त्रिभुवन विमानस्थलमा कार्पेटिङ
कपिलले बिहे गरे
युएईमा एक वर्षमा १ सय तीन जना नेपालीको मृत्यु
९ बैशाख २०७६, सोमबार १०:३७ 2019-04-22 एपी खबर
सानो पाईलामा ठुलो भ्रष्टाचार भईरहेको आरोप
२३ मंसिर २०७६, सोमबार १२:१८ 2019-12-09 एपी खबर
२९ श्रावण २०७६, बुधबार ०५:२७ 2019-08-14 एपी खबर
1 thought on “दाम्पत्य सम्वन्ध : जति धेरै झगडा, उति धेरै माया !”
2019-12-31 at 9:03 am
v1bb1nm2c Ryilj v1bb1nm2c
v1bb1nm2c http://www.bofilm.ru/v/mphRquH7GQU v1bb1nm2c